बलिउडमा तहल्का मच्चाएकी नेपालकी तेरिया मगर के गर्दै छिन ? हेर्नुहोस ।(फोटोफिचर) – Nepal Online Khabar
बलिउडमा तहल्का मच्चाएकी नेपालकी तेरिया मगर के गर्दै छिन ? हेर्नुहोस ।(फोटोफिचर)
काठमाडौ : भारतको चर्चित डान्सिङ रियालिटी शो ‘डान्स इण्डिया डान्स लिटिल मास्टर’ तेस्रो सिजनको उपाधि जितेकी तेरियाको चर्चा अझै उस्तै छ ।
डान्स इण्डिया डान्सको उपाधि जित्दा मात्र १४ वर्षकी तेरिया मगर अहिले १८ बर्ष पुगिसकेकी छिन् ।कुशल नृत्य र आधुनिक डान्स गर्ने प्रतिभाकै कारण तेरियाले लाखौं दर्शकको मन जित्न सफल भएकी छिन् । उनी सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय रहँदै आएकी छिन् । भारतको चर्चित डान्सिङ रियालिटी शो ‘डान्स इण्डिया डान्स लिटिल मास्टर’ तेस्रो सिजनको उपाधि जितेकी तेरियाको चर्चा बिस्वभर छ।
देश तथा विदेशका विभिन्न ठाउँहरुमा आफ्नो प्रस्तुति देखाउँदै आएकी छिन् । मोडल भन्दा कम नदेखिने उनी अहिले निकै सुन्दर बनेकी छिन् । निकै चर्चित बनेकी तेरियाले सानै उमेरमा डान्स शो जितेपछि भारत तथा नेपालका विभिन्न ठूला कार्यक्रममा सहभागी भैसकेकी छिन ।
रुपन्देहीमा जन्मिएकी तेरिया मगर नेपालको पुरा नाम भने तेरिया फौजा मगर हो तेरिया अहिले के गर्दैछिन् भन्ने कौतुहलता उनका फ्यानलाई होला । तेरिया नेपालमा भन्दा भारतमा नै बढी बस्ने भएकाले पनि उनको बारेमा खबर कम आउँछन् ।
उनले, केही समय अगाडि चलचित्र खेल्ने समाचार पनि आएको थियो । यस बिषयमा तेरियाले भनिन्–‘त्यो गलत कुरा थियो । चलचित्र खेल्न लागेको भन्ने खबर आउँदा म पनि अचम्मित भएकी थिएँ ।
अहिले त्यो बिषयमा कुनै सोच छैन ।’ तेरियाले अहिले आफूले त्यस्तो केही काम नगरेको भन्दै सिकिरहेको नै सुनाइन् । ऊनी सामाजिक सन्जालमा पनि निकै सक्रिय देखिन्छिन।उनले निकै नै सुन्दर सुन्दर तस्बिर सार्बजनिक गरेकी छिन।उनलाइ अब फिल्म मा देख्न पाउ भन्ने सबैको आशालाइ पूरा गर्नेछिन ।
Prevयि गायिकाले रमेशको मन चोर्न सफल भईन् ! खास कुरा के हो त ? पूरा पढ्नुहोस ।
Nextमजदुरी गरेर हुर्काएको छोरो तस्करले मारेपछि उजाडियो आमा कलावतीको सपना !